Francis က ကပြောပါတယ်
မတ်လ 1, 2011 တွင် 11:12 ညနေ
အဖြစ်တူညီတဲ့ပြဿနာ 0.7.1 fixed မဟုတ်ငါမှတ်ချက်များအတွက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့:
WP ကတည်းက 3.1 လွှတ်ပေးရန်ငါမရှိတော့ဘာသာပြန်ချက်တည်းဖြတ်နိုင်ပါ၏: ငါသည်တဘာသာစကားများအတွက်ပြင်ဆင်ရန် checkbox ကိုစစျဆေးအဖြစ် (I.E. တွင်), ငါက default စာမျက်နှာ redirected ပါ၏ (ပြင်သစ်). ဤအကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဘယ်အရာကိုမျှ?
မတ်လ 2, 2011 တွင် 9:24 နံနက်
အခုအတွက်တော့ – ရုံထည့်ပါ ?အ url ရဲ့အဆုံးမှပြင်ဆင်ရန် = 1, သင်နှင့်အတူဒီ Debugging ပျော်ရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်
မတ်လ 2, 2011 တွင် 9:55 နံနက်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဟုတ်ကဲ့, ကအလုပ်လုပ်တယ် yhat တူ.
မတ်လ 2, 2011 တွင် 9:20 နံနက်
hi. ငါအချို့အတွေးအခေါ်များရှိ, နှင့်ကိုယ့်ကိုသူတို့ကအကြီးအ system အတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်. ပဌမ, ဘယ်လောက်ကိုယ့်ခေါင်းစဉ်အတွက်ဘာသာပြန်ထားသောစာသားရာခိုင်နှုန်းကိုကြည့်ရှုနိုင်? ဒုတိယ, ကိုယ့်အသုံးဝင်သောအသုံးပြုသူများအတွက်စာရင်းဇယားများထင် “ဘယ်လို သာ. ကောင်း၏”, ဒီအသုံးပြုသူဘာသာပြန်ထားသောစကားနှင့်စာရင်းဇယားနှင့်အတူမည်သည့်အသုံးပြုသူများသည်လယ်ပြင်၌ရှိသောပရိုဖိုင်းအတွက် + widget က “အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး”. တတိယ, ဖြစ်နိုင်သမျှစီမံခန့်ခွဲသူဘာသာပြန်ဆိုများအတွက်မည်သည့်စကားသည် lock များအတွက်, ဥပမာအားကိုယ်တဝက်စာသားဘာသာပြန်ဆိုပြီးသားကောင်းသောများ, ဒါပေမဲ့မည်သူမဆိုဒီပြန်ရေးနိုင်ပါတယ်) ငါ collobrative အဘို့ကောင်းသောဥပမာကိုသိမှုစနစ်ကဒီ translated.by ဘာသာပြန်ဆိုနှင့် notabenoid.com
ထိုအခါအတွက်နောက်ဆုံးမှာ, သငျသညျ wordpres အဘို့ကြီးသော plugin ကိုဖန်တီး, ဤအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
P.S. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်) အကြှနျုပျ၏အင်္ဂလိပ် level ကိုအရမ်းအစပြုသူ, ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကဒီမှတ်ချက်ပြုနှင့်အတူသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ချင်တယ်.
မတ်လ 2, 2011 တွင် 9:26 နံနက်
သင်ကမပြောနိုင် % တစ်တိုင်ပေါ်ဘာသာပြန်ချက်၏သေး, သင်မူကား, စာမျက်နှာ၏အရင်းအမြစ်မှထည့်သွင်း Transposh ဘာသာပြန် meta ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စာမျက်နှာအဆင့်မှာပြောပြနိုင်, ငါသည်ဤသည်အလွန်အသုံးဝင်သောမဟုတ်ပါဘူးကိုသိပေမယ့်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေကြသည်😉
မတ်လ 3, 2011 တွင် 12:10 ညနေ
Transposh ဘာသာပြန်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံး plugin ကိုဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်.
မတ်လ 3, 2011 တွင် 10:56 ညနေ
မတ်လ 9, 2011 တွင် 12:11 ညနေ
ငါအချို့ကောင်းစွာထိုက်တန်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုထည့်သွင်းဖို့လိုခငျြ – ငါသည်ငါ့ wordpress ဆိုဒ်များအများအပြားပေါ်မှာဤ plugin ကိုရှိသည်နှင့်ကပဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူထဲမှာမဆောင်ခဲ့သည်, ဒီ plugin ကိုဒါကောင်းသောအောင်ဘို့ကျေးဇူးတင်စကား.
တစ်ခုမှာမေးခွန်းသော်လည်း, ဒါကြောင့်ဆင့်ခံဒိုမိန်းဥပမာ www အတွက်ဘာသာကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင် (အစက်) အစား www ထက် it.mysite (အစက်) mysite.com/it ?
မတ်လ 9, 2011 တွင် 12:27 ညနေ
ဒါကစီစဉ်ထား feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, အခြို့သောအနာဂတျတှငျထညျ့သှငျးပါလိမ့်မည်😉
မတ်လ 16, 2011 တွင် 8:21 ညနေ
ငါ wordpress ကိုများအတွက်အလားတူ inline ဘာသာပြန်ချက် plugin ကိုစတင်ချင်တယ်ငါကနောက်ကွယ်ကနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်. အချို့အချက်အလက်များအဘို့ကို web browsing ခဲ့သည်, ငါနောက်ဆုံးသင့်စာမျက်နှာပေါ်ဆင်းသက်သောအခါ.
Plugin ကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်! ငါနည်းနည်းပိုထုတ်တွက်ဆသောအခါငါအထောက်အကူပြုဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်.
မတ်လ 20, 2011 တွင် 5:06 ညနေ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! plugin ကိုတိုးတက်လာဖို့ဆိုပံ့ပိုးမှုများကိုတန်ဖိုးထားမယ်လို့